हेर्नुहोस् असोज ११ गते देखी १७ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल : तपाइको यो साता कति शुभः ? – Complete Nepali News Portal
हेर्नुहोस् असोज ११ गते देखी १७ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल : तपाइको यो साता कति शुभः ?
२०७७ असोज ११ गते देखी असोज १७ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे,चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) साताको प्रारम्भमा कार्य क्षेत्रमा लगाईएको लगनसीलताको राम्रो कदर हुनेछ । मनोरन्जन मुलक यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । महत्वपूर्ण जिम्बेवारी हात लाग्ने समय रहेकोछ । सभासम्मेलन जन्यकार्यमा सहभागीताको योग रहेकोछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा नयाँ कार्यको थालनिको निम्ती उत्तम समय रहनेछ । मित्रजनहरुको अधिक सामिप्यता उत्तम नरहला । स्थीर क्षेत्रमा लगाइएको लगानिको दिर्घ कालिन फाईदा प्राप्त रहनेछ । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा खर्चिएको समय मध्यम रहनेछ । आम्दानिका बिभिन्न श्रोतहरु फेला परेतापनि कार्य क्षेत्रमा एक्लोपनको अनुभब रहनेछ । साताको अन्त्यमा अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहनेछ । परीबारका सदस्यहरुबाट टाढाँ भएको महसुस रहनेछ । बिश्वासिला ब्यत्तिहरुबाटँ धोका हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोले साबधानि रहनु होला ।
कर्कट राशि (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) रोकिएर रहेको काम काज सुचारु गर्न उत्तम समय रहनेछ । सामाजिक कार्यमा समय ब्यतित रहनेछ । देश परदेशको यात्राको योग बन्नेछ । प्रतिश्पदिहरु तपाइको प्रगतिमा दंग रहनेछन । आर्थिक क्षेत्र सबल तुल्याउन मातृपक्षको साथ महत्व पूर्ण रहनेछ । मगंलबार पश्चात भने पारीवारिक सम्बन्धमा सामान्य झमेला उत्पन्न हुन सक्नेछ । शारीरिक आलस्यताका कारण गरीरहेको कार्यमा समेत प्रभाब पार्नेछ । साजेदारी कार्यमा साबधानि अपनाउनु पर्ने समय रहेकोछ । साताको अन्त्यतिर स्वास्थका क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या जटिल बन्न सक्नेछ । अरुको बिश्वासमा छोढिएका कार्यहरुबाट सामान्य अपजसको भागीदार हुनु पर्ने योग रहेकोछ । नयाँ लगानीमा समेत सजग रहनुहोला । सामान्य यात्राको योग समेत रहेकोछ । योसाता कुनै कार्य सम्पादन गर्न बिशेष गोप्यता आबश्यक रहनेछ